लघु कथा : हृदयघात “तिमिलाई गाजल र लालि लगाएको कस्तो सुहाएको”| Nepal Pati
लघु कथा : हृदयघात
शनिबार, चैत्र १७, २०७४
- सानू पाै‌डेल
“तिमिलाई गाजल र लालि लगाएको कस्तो सुहाएको”
“हो र ? होइन होला”!
“अनि त्यो केश छोड्दा त परि नै देखिएकि छौ”। रोमा लजाएझैं गरि तर भरत उसको तारिफ गरेर थाकेको थिएन । भरत बिबाहित पुरुष हो । उमेरले ४५ कटेपनि, केटि भने पछि उ हुरुक्कै हुन्थ्यो । पेसाले व्यापारी, न्यूरोडमा निकै चलेको फेन्सी पसल थियो । सामानहरु प्राय बैंकक र कोरियाबाट आयात गथ्र्यो । गुणस्तरिय लुगाको मुल्य मिलाएर दिने हुँदा उसकाे व्यापार चौगुना बढेको थियो । रोमा फाईनान्सबाट डेलि बचतका लागि पैसा उठाउन हिड्ने केटि थिई । निकै राम्री भएकाले भरत उसलाई आफ्नी बनाउन चाहान्थ्यो । रोमा पनि भरतको निकै करिव भईसकेकि थिई ।
आफ्नो श्रीमानले धेरै केटिको बार बार तारिफ गरेको सरिताले सुनेकी थिई । एक दिन उसलाई पनि रहर लागेर मेकअफ गरेर भरतसँग पसल जान ठिक्क परेकी थिई । भरतले कट्किदै“ स्वाईन प्वाइन संग के बिधि दलेको ? मलाई यस्तो गरेको मन पर्देन” । भन्दै गाडी लिएर गयो । साँझ घर फर्केपछि सरिताले न्याउरो मुख लगाउँदै आफ्नो गुनासो पोखी ।
म पनि पन्ध्र सोह्र बर्षमा धेरै राम्री थिएँ । दुनियाँले तारिफ गर्थे । सानैमा हजुरसंग बिहे भो बच्चा भए । उमेर ढल्कीयो । जीन्दगी सधैं एक नास कहाा हुन्छ र ? म त सधै हजुरलाई माया गरेकी छु । सबै भन्दा राम्रो देख्छु हजुरले किन ……………….?
सरीता बोलिराखि उ रोमाको गहिरो प्रेममा परेको थियो । सरिताले जे भने पनि उसलाई रत्ति छुदैनथ्यो । एक दिन भरतले रोमाले बिहे गर्न अनुरोध गर्यो । रोमा मञ्जुर भई । दुवैले एउटा मन्दिरमा गएर बिहे गरे । सर्त मुताविक भरतले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पति रोमाको नाउँमा गरिदियो र रोमा संग छुट्टै घरमा बस्न थाल्यो। त्यो कुरा सरितालाई सूँइको सम्म थिएन । घरबाट सामान लिन बैंकक जान्छु भनेर निस्केको थियो ।
एक दिन रोमा नुहाउँदै थिई। उसको मोबाइलमा बार बार फोन आयो । भरतले कतै घरकाले थाह पाए कि भनेर डराएर उठाएन । एक छिनमा म्यासेस आयो यत्रो पन्ध्र दिन सम्म पनि भरतलाई मार्न सकिनौं ? आज राती उसको परिवारलाई मार्नका लागि म मान्छे लिएर जादैछु । तिमि त्यसलार्इै आजै सिध्धाइहाल अनि हामि मालामाल हुनु पर्छ । त्यो म्यासेस पढ्दा पढ्दै भरत हृदयघात ढलिसकेको थियो ।
गजल-मलाई छोडेर अर्कै सँग रमाएको देख्दा !
अनयासै आँसु बगेर नदि बनेको पत्तै भएन साँच्चै आफन्...
गजल-म संग संगै बग्न चहान्थे नदि बनेर
सधै तनमा मनमा यो आँखामा पनि तिमी नै त छौ सुर ताल ...
" ए चिन्या,चिन्या लाग्यो ! कता बस्नु ...
काठमाडौं । चर्चित अनि व्यस्त कलाकारका रुपमा चिर पर...